Daawo: Dibad-bax ka dhan ah Farmaajo oo ka socda qeybo ka mid ah Muqdisho - Banaadisom
Home Wararka Maanta Daawo: Dibad-bax ka dhan ah Farmaajo oo ka socda qeybo ka mid...
Muqdisho (Banaadirsom) –Qeybo badan oo ka tirsan degmooyinka waqooyi ee magaalada Muqdisho waxaa caawa ka qarxay banaanbaxyo xoog leh oo looga soo hor jeedo mudo kororsiga Madaxweyne Farmaayo.
Banaanbaxa ayaa fiidkii hore ee caawa ka bilaawaday aagga Mirinaayada ee degmada Cabdicasiis, waxuuna ku sii faafay dhul balaaran, iyadoo dadka dhigaya ku qeylinayaan erayo ay ku cabirayaan shacuurtooda.
Dadka banaanbaxaas dhigayey oo wata cod baahiyeyaal ayaa ku dhawaaqayey erayo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo, waxayna lahaayeen, “Kaligi-taliye dooni meyno, Farmaajo ha dhaco, mudo kororsi dooni meyno, Farmaajo waa gacan ku dhiigle” iyo erayo kale oo ay ku muujinayaan diidmadooda ku aadan mudo kororsigii dhacay 12-kii bishan.
Sidoo kale warbaahinta madaxa-banaan ayaa gaartay halka ay banana-baxyadu ka bilaawdeen, waxaana lagu wadaa in xubnaha hoggaaminaya dibad-baxayaasha ay warbaahinta la hadlaan.
Dhanka kale Banaan-baxyo kale ayaa hadda ka socda qeybo ka mid ah wadada Wadnaha ee marta bartamaha magaalada Muqdisho, waxayna si gaar ah uga socdaan Isgoysyada Mirinaayada, Sanca, Jardiinka, Siinaay ilaa Foralansa oo degmada Wardhiigley ka tirsan.
Dadka banaanbaxaya ayaa ku qeylinaya halku dhigyo ka dhan ah Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo.